कसको याद भुलाउन मदिरा पिउन थाले नरेश भट्टराई ? (भिडियो) | Celebrity Nepal
कसको याद भुलाउन मदिरा पिउन थाले नरेश भट्टराई ? (भिडियो)
युवराज वाइवाले निर्देशन गरेको भिडियोमा प्रेमिकाले छाडेपछि उसको याद भुलाउन एउटा प्रेमीले मदिराको सहारा लिएको देखाईएको छ । याद भुलाउन मदिराको सहारा लिँदा प्रेमीले आफूलाई अझ विगारिरहेको भाव भिडियोमा ब्यक्त गरिएको छ । गीतबारे गायक शिव परियार भन्छन्, ‘यसलाई राम्रो आधुनिक गीतका रुपमा चित्रण गर्न चाहन्छु । गीतले नशा पिएर रमाईलो गर्ने भन्दा पनि नशा पिएर म खराव भएँ भन्ने भाव बोल्छ । पक्कै स्रोता–दर्शकले मन पराउनुहुनेछ ।’
संगीतकार आनन्द राईले गीत राम्रो बनेको बताउँदै ‘तिम्रो याद भुलाउन’को सफलताको शुभकामना दिए । निसल पौडेलले छायाँकन गरेको भिडियोलाई विकाश दाहालले सम्पादन गरेका छन् । गीतको भिडियो गोत्र इन्टरटेन्टमेन्टको अफिसियल युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।
शोभाको गजल ‘घायल’मा अर्जुन र सभ्यता (भिडियो)
राजनराजको गीतमा राधाकृष्ण बने पल र रेश्मा (भिडियो)